Sanbaloolshe: Waxaan dhexda u galay dad is khilaafsan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Agaasimihii hore ee Hay’adda Nabad Sugidda Soomaaliya, C/laahi Maxamed Cali Sanbaloolshe ayaa sheegay inuu dhexda u galay qolooyin is khilaafan iyo dad ka baqaya iney xoogeysato awdoodda dowladda Soomaaliya.
“Waxaan soo dhex galay dad kala shakisan oo qaarkood diidan yihiin in awoodda dowladdu xoogeysato, waxaa jira dad ka baqaya in awoodda oo dhan gasho gacanta dowladda, Muqdisho-na noqoto magaalo ay Soomaalida oo dhan u siman yihiin, beesha caalamkuna ku shaqeyn karto” ayuu yiri Sanbaloolshe.
Sanbaloolshe oo wareysi siiyey TV-ga Universal ayaa iska diiday waxyaabihii lagu eedeeyey ee ay ka mid aheyd inuu xiray xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
“Anigu ma bixin amarka lagu xiray xildhibaanka baarlamaanka ka tirsan, markii aan maqlayna si deg deg ah ayaa u amray in la sii daayo” ayuu yiri Sanbaloolshe.
Wuxuu sheegay Sanbalooshe in xilligan la joogo xaaladda Soomaaliya mareyso meel xasaasi ah, ayna isaga ka go’neyd in la go’doomiyo Alshabaab oo hogaamiyahooda dhawaan la dilay, hase ahaatee arrintaas dhantaaleen golaha wasiirada oo soo jeediyey xil ka qaadistiisa.
18-kii bishaan ayaa Golaha Wasiirada Soomaaliya sheegeen iney xilkii ka qaadeen Mr. Sanbaloolshe, hase ahaatee muran sharci ayaa ka dhashay arrintaas, waxaana shalay madaxweyne Xasan Sheekh si rasmi ah mas’uulkaas xilka uga qaaday wareegto madaxweyne.